Gameessicha Ilma Sabaa Jaal Abdii Raggaasaa har’a(Mudde 12,2020)mana Hidhaa Sabbataa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGameessicha Ilma Sabaa Jaal Abdii Raggaasaa har’a(Mudde 12,2020)mana Hidhaa Sabbataa
Gameessicha Ilma Sabaa Jaal Abdii Raggaasaa har’a(Mudde 12,2020)mana Hidhaa Sabbataa-Daalattii jedhamuun beekamu Jaallan kiyya waliin dhaqee dubbiseera.
Haamilee, Cichoomanaa fi Abdiin fuulduratti qabu fuularra dubbifama. Anis Hooggana akkasii qabaachuukoof guddoon gammade. Jaal Abdiin Akkas jedhe; “Anaan akkan hojii Siyaasaa Dhaaba(ABO) hin hojjenneef sababaa xixiqqaa walitti guuranii na tursuu barbaadu. Inni kun ammoo tarsiimoo isaan ittiin dhaaba dadhabsiisuuf saganteeffatan keessa tokko dha.
Yeroo hedduu Dhaddacha irratti yeroon dhiyaadhu Abbaan Alangaa gadi bahee qaama nuti hin beekne dubbisee Dhaddachatti deebi’a; kanarraa kan hubannu Abbootii Alangaa akkasumas Abbootiin Seeraa dhiibbaa jala jiraachuu akkasumas na hiikuuf aangoo akka hin qabne akeeka. Warra Siyaasaa PP oofuufi tikatu harkaa qaba malee mana murtii miti.
Kanaaf isin jabaadhaatuma Ijaarsa Jaarmayaa Jabeessaa, qabsoon harka dhaloota jira; dhaabichis kan Ummataa waan ta’eef ABO diiguu hin danda’ani” kan jedhu dhaammate.
Kanaaf ilmaan Oromoo Bilisummaa keenyaaf falmannu galfata kana akka milkeessinu shakkiin hin jiru!
Gadaa Gabbaisaa tiin
Dhoksaan Fanxoo hin fayyisuu jedhani.
Fanxoon maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin Minneapolis, Awuroopaa fi Torontoo keessa maan’efatee waggaa lamaaf jeequmsaf diiggitii WBO irratti xiyyefate gaggeessa ture yeroon inni itti saaxilamu ammadha. Gartuun kun hundumtuu diyaaspooraa taa’eeti Oromiyaatti WBO hogganuu barbaada, kana keessatti gariin isaanii saamicha dinagdee maqaa adda addatiin WBO irratti gaggeessaniru.
Amma booda dubbiin “jaamte jaamti malee saree ija hin dhiqaniidha” isin hundi keessanu gufuu qabsoo kanaati malee faayidaa qabsoo kanaa miti. Qabsoon Oromoo Oromiyaatti galeera WBOn maallaqaan hin ijaaramne maallaqaan hin diigamu, miidiyaatiin hin ijaaramne miidiyaatiin hin diigamu, gandaan hin ijaaramne gandaan hin diigamu.
Qabsaawaan hundi saboonaa miti ayyaan ilaallatuun keessa riphee haala mijaawaa eggatu ni jira, Fkn ABO Hilton fi Soodaree kkf kaleessa sabboontota jedhamanii faarfamaa turani, kan ABO jaallatu hundi ABO miti, kan WBO jaallatu hundi fira WBO miti. Kanaaf hoggantoonni WBO akkasumas hoggantoonni ABO osoo beektaniis haa ta’u osoo hin beekiin shira diyaaspooraa keessa deemaa jiru keessaa harka qabdaan hatattamaan harka keessa baafadha.
Sagaleen WBO rasaasa isaati, rasaasa keessantu fira isinii horas isin irraa faggeessas , diyaaspooraan hojiin isaa dinagdeedhan tumsuudha kan biraa akka gochuu hin dandeenye ragaan waggoota 28 darbaan keessa argine caalu hin jiru. Amma moo Oromoon waan mooraa qabsoo isaa keessa jiru isa dhugaas isa kijibaas, jaabinaaf laafinas beekuun dirqamadha.
Seenaa odeessiteef seenaa hojjette jechuu miti, seenaa hojjedhuutii seenaa namatti himi malee.Mr.X, Y, Z , seenaa hedduu dubbachuu beeka malee seenaa hojjechuu hin beeku, Bilisummaan seenaa oddeessuutiin osoo hin taanee hojjechuutiin dhufa. Yeroon kun Oromoof yeroo seenaa hojjechuuti malee odeessuu miti, amma hayyuuf goota seenaa odeessuu irraa gara hayyuuf goota seenaa hojetuu haa ceenu.
Sobduuf hattuun, gantuun ayyaan ilaallattuun haa baddu.
Dhugaa dubbadhu, qaama qabsoo bilisummaa Oromoo ta’i.
Balaan buute yasus/isaan oromoodha jedhanga baga gammaddan oromo
Waraanni biyya Keeniyaa, liyyuu hayiliin Somaalee fi waraanni bilxiginnaa kallattii sadiin duuluun waraana hamaa ummata Oromoo Booranaa fi Gujii irratti banuuf deemu.
Ammallee ummanni Oromoo ciisee walirratti laaluutti jira. Yoo akka bara warraaqsaa sanitti tokkummaa jabaatiin kaanee falmachuu baanne, ummata Oromoo lafarraa fixanii lafa duwwaa haferra sanyii isaanii qubsiifachuuf duubatti jedhaa hin jiran gareewwan diinaa.